मधेशमै यस्तो : छात्राहरु बेहोस हुनथालेपछि विद्यालयमै चण्डी पूजा, बेहोस हुने क्रम जारी !
चिकित्सक वा विशेषज्ञबाट परामर्श लिएर आवश्यक उपचार गर्नुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ ।
प्रकाशित मिति : २६ असार, २०७६ | बारा, ०८:२४:०० बजे
न्यूज ब्यूरो । प्रदेश नं. २ को बारा जिल्लाका एक विद्यालयमा छात्राहरु बारम्बार बेहोस हुन थालेपछि विद्यालय नै बन्द गरी चण्डी पाठ एवम् पूजा गरिएको छ ।
बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर ११ लालस्थित नेरामाविका विद्यार्थीहरुमा अनौठो खालको विराम देखापरेपछि कक्षाकोठाभित्रै ग्रह शान्ति र चण्डी पूजा गरिएको हो ।
धामीले ग्रहदशा बिग्रेर विद्यार्थी विरामी परेको बताएपछि विद्यालयले पुरोहित बोलाएर कक्षा कोठामै ग्रहशान्ति पूजा र चण्डी पाठ गराएको जनाइएको छ । धामी झँक्रीको सल्लाहामा लागेका केही अभिभावकको अनुरोधमा विद्यार्थी निको पार्न पूजा गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिनारायण लाल कर्णले जानकारी दिए । उनले ५ जना पुरोहति बोलाएर बिहान ७ बजेदेखि ४ बजेसम्म कक्षा कोठामा नै वेद, रुद्री र चण्डी पाठ तथा पूजा गरिएको जानकारी दिए ।
पूजा चल्दै गर्दा पनि विद्यार्थीहरु पटकपटक बेहोस बनेका थिए । पूरोहितले प्रभावित छात्रालाई जवरजस्ति पूजाको प्रसाद खान लगाएका थिए । विद्यालय बन्द गरेर गरिएको पूजा कार्यक्रममा विरामी विद्यार्थी, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, अभिभावक तथा शिक्षकको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
शुरुमा कक्षा ४ मा अध्ययन गर्ने ३ जनामा देखापरेको सो समस्याबाट एक साताभित्र ८ जना छात्रामा देखिएको प्रधानाध्यापक कर्णले जानकारी दिए । उनीहरुले कक्षा शुरु हुने बित्तिकै रुने, चिच्याउने, उफ्रिने र एक्कासी बेहोस हुने जस्ता समस्या देखा परेको थियो । यस्तो समस्या देखिएका विद्यार्थीका कारण विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएपनि ग्रहशान्ति पूजा गरिएको प्राध्यापक कर्णले बताए ।
घरमा बस्दा भने उनीहरुमा त्यस्तो कुनै समस्या नदेखिएको बताइएको छ । अन्य विद्यार्थीमा समेत प्रभावित हुनसक्ने आशंकामा अघिल्लो साता २ दिन विद्यालय नै बन्द गरिएको थियो । कतिपय अभिभावकले विद्यालयमा पिचासले बास गरेको र विद्यार्थीलाई दुःख दिएको समेत बताउदै आएका छन ।
प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र हरैयाका चिकित्सक राजिव सिन्हाले कुनै देवीदेवता वा पिचासका कारणले नभई मानसीक तनावका कारण किशोरावस्थाका केहीमा यस्तो समस्या देखापर्ने बताए । उनले कन्भर्शनल डिसअर्डरले प्राय किरोरीहरु प्रभावित हुने गरेको र २० बर्ष उमेर पार गरेपछि समस्या आफै हराउने पनि बताए ।
चिकित्सक वा विशेषज्ञबाट परामर्श लिएर आवश्यक उपचार गर्नुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ । यसको लागि सम्बन्धित निकायले विशेष चिकित्सक टोलिको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।